Mapapiro ehuku negariki, dhishi risinganetsi rine zvakawanda zvinonaka | Kicheni Mapepa
Garlic Chicken Mapapiro
Vamwe Garlic Chicken Mapapiro, recipe yakapfuma uye yakapusa. Isu tese tinofarira huku asi mapapiro acho anofadza, akagochwa zvakanaka uye shava regoridhe anonaka. Iyo huku inogona kugadzirirwa munzira dzakawanda uye ikapihwa hwema hwatinofarira zvikuru, asi sezvo chikamu ichi chehuku chichifarirwa zvakanyanya, chakakangwa.
Ndakagadzira mapapiro ehuku aya muchoto negarikiIzvo zvinotyisa uye zvinonaka. Edza ivo seizvi uye iwe uchaona kuti vanozovada sei kumba, pamusoro pekuzviita muchoto isu tinodzivirira kuwedzera mamwe mafuta, chete chete zvakakwana kuti ubike uye negariki minced nembatatisi, chikafu chakanaka.
1 kilo yemapapiro ehuku
4 gariki clove
200 ml. waini chena
Mishonga (thyme, rosemary ..)
Isu tichachenesa mapapiro uye toaisa mupani yeovheni. Tinoavarunga nemunyu uye mhiripiri.
Isu tichagadzirira mash nemugarlic minced uye parsley mudhaka, tichaipwanya zvakanaka toisa girazi rewhite wine, kurimutsa zvakanaka nekuparadzira zvakanaka pamusoro pemapapiro ehuku, kuvamutsa kuitira kuti vese vatore zvigadzirwa. Isu tinovarega vazorore kwemaminetsi makumi matatu kusvika makumi mana.
Isu tinobatidza hovhoni kusvika ku180ºC, kana nguva yapfuura tinotora dhishi nemapapiro, ndokusvuura mbatatisi shoma, ndokucheka muzvikwere ndokuisa padivi pemapapiro ehuku, kuisa mamwe mahebhu kumusoro kune zvatinoda uye zvakanaka jeti yemafuta, tinoimhanyisa uye toiisa muchoto kudzamara zvasviba.
Kana ivo varipo, tinovaburitsa kunze nekuvashumira vachipisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Shamwari » Mapinda Anopisa » Garlic Chicken Mapapiro
Yogati, nzungu uye chokoreti makapu